လမ်းလျှောက်တတ်စ ကလေးငယ်များအတွက် အကျိုးရှိစေမည့်သွားတိုက်နည်း ခြောက်သွယ် - Hello Sayarwon
လမ်းလျှောက်တတ်စ ကလေးငယ်များအတွက် အကျိုးရှိစေမည့်သွားတိုက်နည်း ခြောက်သွယ်
Dr. Kaung Thar မှ ရေးသားသည်။ 10/09/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကလေးငယ်များ အထူးသဖြင့်လမ်းလျှောက်တတ်စအရွယ်များသည် သွားတိုက်ခြင်းကို နှစ်မြို့လေ့မရှိကြပေ။ သွားတိုက်ချိန်များတွင် သင်၏ကလေးနှင့် နပန်းလုံးနေရသကဲ့သို့ အချို့ရက်များတွင် အော်ဟစ်ငိုယိုခြင်း ဝုန်းဒိုင်းကြဲခြင်းဖြင့် သင်၏ရေချိုးခန်းအား ရှုပ်ပွညစ်ပတ်စေလိမ့်မည်။ ကလေးများသည် သွားမတိုက်လိုကြပေ။ အချို့ရက်များတွင်တော့ သင်သွားတိုက်ပေးတာမခံလိုဘဲ သူတို့ဘာသာသွားတိုက်ဖို့ တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သင်ခွင့်ပြုလိုက်လျှင်တော့ သင်ထင်မှတ်မထားလောက်အောင် ရေချိုးခန်းတစ်ခုလုံး ရေများ သွားတိုက်ဆေးများနှင့် ပွပေနေသည်ကို တွေ့ရပေမည်။ ကဲ ဒီလိုဆို သင့်ကလေး၏ သွားတိုက်ချိန်ကို ပျော်စရာကောင်းပြီး သွားတွေစင်ကြယ်အောင်တိုက်ပေးနိုင်မည့် အချိန်လေးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြောင်းလဲကြမလဲ။
၁။ သွားတိုက်တံကို ကလေးကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခိုင်းပါ။
ပထမဆုံးအကြိမ်တွင် ကလေးများကို မိမိနှစ်သက်ရာသွားတိုက်တံနှင့်သွားတိုက်ဆေးရွေးချယ်ခိုင်းပါ။ မိမိကလေး၏ အသက်ပေါ်မူတည်ပြီး သင့်တော်သောသွားတိုက်တံတွေထဲမှာမှ သူအနှစ်သက်ဆုံးသွားတိုက်တံကိုရွေးချယ်ခိုင်းပါ။ ကလေးငယ်သည် သူကြိုက်သော သွားတိုက်တံ အပိုင်ရပြီဆိုတာနှင့် ညမနက်သွားတိုက်ချိန်များမြန်မြန်ရောက်ချင်နေလိမ့်မည်။
၂။ ဖြည်းဖြည်းချင်း သင်ပေးပါ။
ကလေးများကို သွားဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဆိုတာကို ချက်ချင်း အတင်းအကြပ်ပြသပြီး တွန်းအားမပေးပါနှင့်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းသာ သင်ပေးပါ။ ရှေးဦးစွာ သင်၏ကလေးကို ၎င်းတို့လက်နှင့် သွားတိုက်တံကိုကျင့်သားရအောင် ကိုင်ခိုင်းပါ။ သုံးပြီးသား သွားတိုက်တံတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးပေါင်းများစွာပါဝင်နိုင်တာကြောင့် သုံးပြီးသား သွားတိုက်တံကိုမကိုင်ခိုင်းပါနှင့်။ ထိုအစား သွားတိုက်တံအသစ်တစ်ခုကို ပေးထားပြီး အရုပ်ကဲ့သို့ ဆော့ကစားပါစေ။ ကလေးငယ်များ သွားတိုက်တံ၏ အမွေးနုလေးများနှင့်ကျင့်သားရလာပြီဆိုပါက သွားတိုက်နည်းစတင်သင်ကြားပေးနိုင်ပါပြီ။ ကလေးငယ် အန္တရာယ်ကင်းစေရန် သွားတိုက်တံကိုင်နေစဉ် ကလေးငယ်အနားတွင်ရှိနေပေးပါ။
၃။ အပြန်အလှန် သွားတိုက်နည်း ကစားပါ။
သင့်ကလေးကို သင့်အားသွားတိုက်ပေးစေပြီး သင်ကတစ်ပြန် သင့်ကလေးကို သွားတိုက်ပေးပါ။ ဤကဲ့သို့ တစ်ယောက်တစ်ပြန်သွားတိုက်ကစားခြင်းဖြင့် ပိုမိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော သွားတိုက်ချိန်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
၄။ သင်လုပ်သလို လိုက်လုပ်ခိုင်းပါ။
ကလေးငယ်ရှေ့တွင် သွားတိုက်ပြပါ။ ထို့နောက်ကလေးငယ်ကိုထိုပုံစံအတိုင်း လိုက်တု၍သွားတိုက်စေပါ။
၅။ တစ်ခါတစ်လေ ခြောက်လှန့်ပေးပါ။
ကလေးငယ်များကို ခြောက်လှန့်စေခိုင်းခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခု မဟုတ်သော်လည်း အချို့အချိန်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း သွားဆရာဝန်များ သွားဆေးခန်းသုံးကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ခြောက်လှန့်ခြင်း( ဥပမာ သွားဆရာဝန်ကြီးက မိမိသွားမတိုက်လျှင် သွားတွေကိုနှုတ်ပစ်မှာနော်) မျိုးမပြုလုပ်သင့်ပါ။ ထိုအစား သွားမတိုက်ပါက ပိုးမွှားအင်းဆက်များ ပါးစပ်ထဲတွင် နေထိုင်ကျက်စားနေမည် ဟူသော ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းများ ပြောပြ၍ ခြောက်ခြင်းသည် ပို၍အကျိုးရှိစေနိုင်ပါသည်။
နည်းပညာအကူအညီရယူခြင်းသည် ကိစ္စအတော်များများကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ ပျော်ရွင်စရာကောင်းသော သွားတိုက်ချိန်ကို မဖန်တီးနိုင်ဘူးဆိုပါက အိုင်ဖုန်းအပလီကေးရှင်းစတိုးတွင် Star Teeth ဟုခေါ်သော အပလီကေးရှင်းကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အချိန်နှစ်မိနစ်သတ်မှတ်သည့်ခလုတ်နှိပ်ပြီး နှစ်မိနစ်မှ သုညရောက်သည်အထိ ဖုန်းမှရေတွက်ပေးပါလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်တွင် ကလေးကို သွားပြီးအောင် တိုက်နိုင်ပါသည်။
6 Effective Tooth-Brushing Tips For Toddlers. https://my.theasianparent.com/effective-tooth-brushing-tips-for-toddlers/. Accessed February 27, 2017
အဝလွန်နေတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အသက်အရွယ်အလိုက် ဝိတ်ချနည်းများ
သင့်ကလေး ခဏခဏ နားပြည်ယို နေရင် ဒါကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးကို စကားပြောတတ်အောင် ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲ
ကလေးမှာ ဆုံဆို့နာ မဖြစ်အောင် မေမေတို့ ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ။